ဒီပဲယင်းတွင် အလယ်တန်းကျောင်းခွဲကို အခြားရွာသို့ မပြောင်းရွှေ့စေရေး ကျောင်းသားမိဘများ ဆန္ဒထ - Yangon Media Group
ဒီပဲယင်းတွင် အလယ်တန်းကျောင်းခွဲကို အခြားရွာသို့ မပြောင်းရွှေ့စေရေး ကျောင်းသားမိဘများ ဆန္ဒထ
ဒီပဲယင်း၊ ဇူလိုင် ၂
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး ရွှေဘိုခရိုင် ဒီပဲယင်းမြို့ နယ် ဆင်ရောက်ကုန်းရွာမှ ကျောင်းသားမိဘ ၁ဝဝ ကျော်သည် ၎င်းတို့ရွာရှိ အခြေခံပညာအလယ်တန်း ကျောင်း(ခွဲ)အား အခြားရွာသို့ မပြောင်းရွှေ့စေရေးအတွက် ဇူလိုင် ၂ ရက် နံနက် ၉ နာရီက ဒီပဲယင်း မြို့ပေါ်တွင် ဆန္ဒထုတ်ဖော်တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ဆင်ရောက်ကုန်းရွာနှင့် ချောင်း ခြားသော အခြားရွာရှိ အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း(ခွဲ)ကျောင်းဆောင်သစ်သို့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများနှင့် ဆရာ၊ ဆရာမများ ရွှေ့ပြောင်းသင်ကြားရန် စစ်ကိုင်းတိုင်းပညာရေးမှူးရုံးမှ ဇွန် ၂၆ ရက်က စာထုတ်ပြန်ခဲ့ရာမှ အမိန့်စာကို ပယ်ဖျက်ပေးရန် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကျောင်းသားမိဘများက ပြောကြားသည်။ ”တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကလည်း မစူးစမ်းဘဲ ပြောင်းခိုင်းတယ်။ ကျောင်းသားချင်း ရန်ဖြစ်တာတွေ နဂိုကလည်းရှိတော့ မိဘတွေက စိုးရိမ်ကြတာ”ဟု ဆင်ရောက်ကုန်း ရွာမှ ကိုနိုင်မင်းက ပြောသည်။
ဆင်ရောက်ကုန်းရွာ အလယ်တန်းကျောင်းခွဲမှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၆၂ ဦးရှိပြီး ယင်းကဲ့သို့ ကျောင်းပြောင်းရွှေ့ရန်ကို ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်ကလည်း ဒေသခံများက ကန့်ကွက်သဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားခြင်းဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။ ”ကျွန်တော် သိရသလောက် တော့ အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ အားလုံးကောင်းအောင် လုပ်ပေးတာပါ။ တော်တော်များများတော့ အကုန်ခေါ်ညှိတာရှိတယ်။ အစိုးရအဖွဲ့ကလည်း အတည်ပြု ဆုံးဖြတ်ထားတာလေ။ အဲဒီရွာအုပ်စုက ရွာသုံးရွာမှာ နှစ်ရွာက ပြောင်းချင်တာရှိတယ်။ သို့သော်လည်း လူ့အလို နတ်မလိုက်နိုင်ဘူးလေ၊ ဟိုကတည်းက အကြိမ်ကြိမ် ညှိနှိုင်းနေတာလို့သိရတယ်”ဟု တိုင်း ပညာရေးမှူးရုံးမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးစိန်မောင်ညွန့်(စီမံ၊ ဘဏ္ဍာ)က ပြောသည်။
ဆင်ရောက်ကုန်းရွာအလယ်တန်းကျောင်းခွဲမှ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများ အခြားရွာမှ အလယ်တန်းကျောင်းခွဲသို့ ပြောင်းရန် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီများ၊ ပညာရေးဌာနမှ ပြည်သူများကွင်းဆင်းညှိနှိုင်း၍ စိစစ်တွေ့ရှိ တင်ပြချက်များကို စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ကက်ဘိနက် အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၁၁/၂ဝ၁၈) ဆုံးဖြတ်ချက် ၇၇ အရ ပြောင်းရွှေ့သင်ကြားရန်စာ ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒေသခံများသည် မူလနေရာမှ အလယ်တန်းကျောင်းခွဲမပြောင်း ရေး၊ ဒေသခံပြည်သူများနှင့် ဆွေး နွေးခြင်းမရှိသော ထုတ်ပြန်ချက် အမိန့်စာအား ပယ်ဖျက်ရေးဟူသောြေ<ွကးကြော်သံများ ဟစ်ကြွေးဆန္ဒ ထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသည်။
မန္တလေး မဟာမုနိဘုရားကြီး အရှေ့ ၄၅ တာ ဘောလုံးကွင်းတွင် တည်ဆောက်နေသော အဆင့်မြင့် ယာဉ်ရပ်နားစခ
မကွေးတွင် မိုးအဆက်မပြတ် ရွာသွန်းခဲ့ခြင်းကြောင့် ပျက်စီးသွားသည့် နှမ်းစိုက်ခင်းများ နွားစ
ကြောက်ကြောက်ကြောက်-၂ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ရိုက်ကူးတော့မည်
ရန်ကုန်တွင် နယ်ကျော် မောင်းနှင်နေသည့် ဆိုင်ကယ်နှင့် လိုင်စင်မဲ့ ဆိုင်ကယ်များကို တွေ့ရှိသည
မြို့နှင့် အလှမ်းကွာဝေးသော ကျေးရွာပြည်သူများ အတွက်ပါ အကျိုးရှိစေမည့် ၁၆ ခုတင်ဆံ့ တိုက်နယ်??
စွန့်ပစ် အမှိုက်အချို့ပြန်သုံးပြီး နောက်ဖေးလမ်းကြား ဥယျာဉ်အဖြစ် ဖန်တီး အလှဆင်သင့်ဟုဆို
ထိုင်းနိုင်ငံ ရေလုပ်သားများကို G to G စနစ်ဖြင့် စေလွှတ်ရန် နှစ်ဖက်မူအားဖြင့် သဘောတူထားဟု ပြည်ေ??